China isikipa mveliso kunye nabenzi | Umbono
I-Kid Tee ithambile kwaye ithambile ithatha i-100% slub cotton t-shirt. Ubunzima bokukhanya, i-t-shirt yentamo elungiselelwe kakuhle intle kakhulu xa ujonga into enoluvo longezelelekileyo lomgangatho. * I-100% ye-slub cotton inika ihempe ukuziva ngesandla okuthe tye okulungeleyo nasiphi na isicelo sokuprinta ngokwesiko kwaye inempawu ezifanelekileyo ngakumbi ezigcina zingakhange zikhangeleke kwi-boxy.
I-tee ye-classic entle kakhulu ilungele naliphi na iqela. Ifumaneka kuluhlu olubanzi lobungakanani ngokulingana okufanelekileyo, le mveliso iya kuhlangabezana neemfuno zeqela lakho ngexabiso oza kulithanda.
Uhlobo lweMveliso Isiko leThirt yeNtwana yesiqhelo
Izinto eziphathekayo I-100% ye-slub cotton
Uhlobo lwengubo Ijezi
Ubunzima begram 150gsm, okanye njengoko kuceliwe
Egqithileyo Umphezulu wetanki
Okulandelayo: uphawu lwenkcubeko olucacileyo lophawu olucekeceke ukuhambisa igxalaba labasetyhini
I-T-Shirts ze-Bamboo zaBantwana
I-T-Shirts ezithambileyo zoqalo zaBantwana